२०७७ कार्तिक २ आइतबार ०८:४१:००
रामविलास पासवान बिहारको त्यस्तो पृष्ठभूमिबाट आएका नेता हुन्, जहाँ सामन्तवाद आफ्नो क्रूर रूपमा विद्यमान छ । सम्भवतः स्वतन्त्रतापछि जात व्यवस्थाको माखेसाङ्लोमा मानिस सबैभन्दा धेरै अल्झिएका छन् । मुक्तिका प्रयास नभएका होइनन्, तर ती सफल भएनन् । यसको सबैभन्दा ठूलो कारण अधिकांश नेतामा गान्धीको अतिरिक्त छाप पर्नु हो, जसमा दलित नेता पनि थिए । हरिजन शब्दको प्रयोग खुलेर हुने गथ्र्यो । त्यसको एउटा महत्वपूर्ण कारक बाबु जगजीवन राम पनि थिए । जगजीवनको अम्बेडकरसँग प्रतिस्पर्धा थियो भने गान्धीसँग निकटता थियो । प्रारम्भिक दिनहरूमा पासवान पनि हरिजन शब्दको प्रयोग गर्ने गर्थे, तर पछि अम्बेडकरवादी साथीहरूसँग नजिक भएपछि उनले दलित शब्दको प्रयोग गर्न थाले । एवं रीतले उनी अम्बेडकरको नजिक र गान्धीदेखि पर हुँदै गए ।
यो नै उनको राजनीतिक परिपक्वता थियो । ढिला भए पनि उनी अम्बेकरबाट प्रभावित भए । दलित राजनीतिमा यो उनका लागि एकातर्फ प्रेरक कुरा थियो भने अर्कोतर्फ यसले उनलाई दलित नेताका रूपमा उभ्याउन ठूलो भूमिका खेलेको थियो । दलित राजनीतिमा बिपी मौर्य, काशीरामदेखि जगजीवन रामसम्म अस्ताउन लागेका नेता थिए भने पासवान उदाउँदै गरेका थिए । त्यसका साथै दलित समुदायका मानिस परिवर्तन चाहन्थे । उनी पुरानोसँग आजित भइसकेका थिए र अम्बेडकरवादी नयाँ नेतृत्वलाई आन्दोलन सुम्पन चाहन्थे । पासवानको जन्म सन् १९४६ मा बिहारको दलित परिवारमा भएको थियो ।
उनले स्नातकोत्तरसँगै एलएलबी पनि गरेका थिए । उच्च शिक्षासँगै दागविहीन छविका साथ उनले आफ्नो जीवनलाई राजनीतिमा होम्ने निर्णय लिए । पासवानको राजनीतिक उतारचढावको कुरा गर्ने हो भने उनले संयुक्त सोसलिस्ट पार्टीबाट राजनीतिमा पहिलो पाइला चाले । सन् १९६९ मा बिहार विधानसभामा यसै पार्टीको झन्डाअन्तर्गत निर्वाचित भएर आए । त्यसपछि उनले पछाडि फर्किएर हेर्नुपरेन । त्यसको धेरै पछि मात्र त्यो ठाउँबाट जित्ने व्यक्तिमा जनता दल युनाइटेडका रामसुन्दर दास थिए । उनी पूर्वमुख्यमन्त्री थिए । रामसुन्दर दास पनि दलित थिए । पासवानको राजनीतिको सुरुवाती दिनको कुरा गर्ने हो भने त्यो समय उनका लागि मात्र होइन कि उत्तर भारतको दलित आन्दोलनका लागि पनि सुनौलो युग थियो । तिनताका ब्राह्मणवादको जग हल्लिन लागेको थियो । डा. अम्बेडकरलाई मानिसले पढ्न र बुझ्न थालेका थिए । राजनीतिमा अम्बेडकर र लोहियाका सपना पूरा गरिनुपर्छ भन्ने अभियान पनि सुरु भइसकेको थियो ।
तिनताका ब्राह्मणवादको जग हल्लिन लागेको थियो । डा. अम्बेडकरलाई मानिसले पढ्न र बुझ्न थालेका थिए । राजनीतिमा अम्बेडकर र लोहियाका सपना पूरा गरिनुपर्छ भन्ने अभियान पनि सुरु भइसकेको थियो ।
प्रारम्भिक दिनमा रामविलाससँग प्रायजसो मेरो भेट सुरेन्द्र मोहनको निवास बिपी हाउसमा अथवा उनको घरमा हुने गथ्र्यो । त्यतिवेला उनको बसोवास साउथ एभेन्युमा थियो । सन् १९७७ मा पासवान जनता पार्टीका तर्फबाट हाजिपुर निर्वाचन क्षेत्रबाट पहिलोपटक निर्वाचित भएर आएका थिए । यो निर्वाचनमा उनले निकै धेरै मत ल्याएका थिए, जुन वल्र्ड रेकर्डमा दर्ज हुन पुग्यो । राजनीतिमा उनको यो शक्तिशाली प्रवेश थियो । त्यस्तो प्रवेश, जसबाट राजनीतिक पण्डित पनि एकचोटि आताल्लिए । अर्कोतर्फ दलित समुदायले आफूहरूको मुक्तिदाता फेला पारेको ठाने । उनले ‘न्याय चक्र’ नामको मासिक पत्रिका पनि सुरु गरे, जसको सम्पादक गुरवचन थिए । पछि दुई वर्षजति मैले पनि त्यसमा सम्पादकको रूपमा भूमिका निर्वाह गरेँ । त्यसैले प्रायजसो जनपथस्थित उनको निवासमा आउने–जाने भइराख्थ्यो । ‘न्याय चक्र’ मूल रूपमा आन्दोलनको पत्रिका थियो।
सन् १९८९ मा पहिलोपटक उनी केन्द्रीय मन्त्री बने । समाज कल्याणका साथसाथै उनी श्रममन्त्री पनि बने । त्यतिवेला बिपी सिंह प्रधानमन्त्री थिए । डा. अम्बेडकर जन्मशताब्दी समारोह समितिको गठन हुँदै थियो र दलित नेताहरूमा रामविलास पासवान शीर्षमा थिए । उनलाई मैले एउटा कार्यकर्ताका रूपमा, नेताका रूपमा र मन्त्रीका रूपमा पनि नियालेको छु । त्यतिवेला उनी तीनवटा भूमिका निर्वाह गरिरहेका थिए । तर, मन्त्री पद उनीमाथि हावी हुँदै गइरहेको थियो । पुराना साथीभाइ छुट्दै गइरहेका थिए र नयाँ जोडिँदै थिए । यस्तो झन्डै सबैसँग हुन्छ । पासवान त्यसमा अपवाद थिएनन् । निकै धेरै मान्छे उनलाई भेट्न आउने गर्थे, जसमा साधारणदेखि खास दुवै हुन्थे ।
मलाई सम्झना छ, त्यति नै वेला लोकसभाको निर्वाचन जितेर फुलनदेवी पासवानलाई भेट्न आएकी थिइन् । पासवानको एउटा निकै सटिक चुनावी नारा थियो– ‘जुन घरमा अँध्यारो छ, म त्यसै घरमा दियो जलाउन निस्केको हुँ ।’ त्यसो त प्रत्येक चुनावी नारा फगत नारा मात्रै हुने गर्छन् । कुनै अँध्यारो घरमा दियो बल्यो कि बलेन, कुनै बेरोजगारले रोजगारी पायो कि पाएन, यो बेग्लै कुरा हो । तर, स्पष्ट कुरा के हो भने कुनै व्यक्ति लगातार सत्ताको भर्‍याङ चढिरह्यो भने ऊ जनताबाट टाढिँदै जान थाल्छ । पासवान पनि जगजीवनको विरुद्ध उभिएर उनैको विरासत धान्न अघि बढ्दै थिए ।
पासवानले दल फेरेर भाजपाजस्तो साम्प्रदायिक पार्टीमा प्रवेश गर्नुलाई मसमेत उनका पुराना साथीभाइले सही ठहर्‍याउन सकेनौँ, तर यसैलाई त राजनीति भनिन्छ । यदि राजनीति यही हो भने तिनीहरूको के होला, जसले निर्वाचनमा आफ्नो मुक्ति हुने आशासहित भोट दिएका छन् ? सवाल कुनै एउटा पासवानको होइन । सवाल हो, तथाकथित प्रतिनिधिको । रामविलास पासवान आफ्नो जीवनको आरम्भमा जुझारु दलित नेता थिए । उनले दलितको सुरक्षाका लागि दलित सुरक्षा सेना पनि बनाए । उनको सेनाले कति दलितलाई सुरक्षा दिन सक्यो ? एक लाइनमा भन्दा उनको आरम्भिक राजनीतिक जीवनको उद्देश्य र उत्तराद्र्धको उद्देश्य एउटै थिएन ।
(नैमिसराय ख्यातिप्राप्त भारतीय दलित साहित्यकार हुन्)